10 Ft FTL Load – GTA Transportation Co.,Ltd
GTA Transportation Co.,Ltd
Home / Box Truck/ Open Truck - Read More! / 10 Ft FTL Load
10 Ft FTL Load
SKU: T96007 Category: Box Truck/ Open Truck - Read More!
အထက်ဖော်ပြပါ ယာဉ်မှာ (နမူနာ) ပုံစံပြသထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ငှားရမ်းမှုပုံစံများမှာ လချုပ်ငှားရမ်းခြင်း၊ နှစ်ချုပ်ငှားရမ်းခြင်း၊ ခရီးတိုငှားရမ်းခြင်း(မြို့တွင်း)၊ အချိန်ပိုင်းငှားရမ်းခြင်း(မြို့တွင်း)၊ နယ်ဝေးခရီးပို့ဆောင်ရန်ငှားရမ်းခြင်းများဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးပါသည်။
ငှားရမ်းမှုပုံစံများတွင် ယာဉ်၊ ယာဉ်မောင်း၊ ယာဉ်အကူ၊ လိုအပ်ပါက ယာဉ်အစားထိုးပြောင်းလဲပေးခြင်း၊ စက်သုံးဆီကုန်ကျစရိတ်၊ ယာဉ်ပြုပြင်မှုကုန်ကျစရိတ်၊ လမ်းတံတားကြေး၊ ယာဉ်အာမခံ၊ GPS system (Global Position System) for route tracking အပါအဝင် ငှားရမ်းနိုင်ပါသည်။
ငှားရမ်းမှုများအား သတ်မှတ်လိုင်စင်ရှိ ကျွမ်းကျင်သော ယာဉ်မောင်းများဖြင့် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊နိုင်ငံတော်မှချမှတ်ထားသော ယာဉ်စည်းကမ်း၊ လမ်းစည်းကမ်းများနှင့်အညီ မောင်းနှင်စေခြင်း၊ ယာဉ်အတွင်း/အပြင် သန့်ရှင်းရေးများ၊ အနံ့အသက်များ ကင်းစင်အောင် အထူးဂရုပြုဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊ ငှားရမ်းသူ၏ လိုအပ်ချက်များအပေါ် ပူးပေါင်းညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။
GTA Company သည် ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ၏ ဥပဒေများအောက်တွင် မှတ်ပုံတင်ထည့်သွင်းထားသော ကုမ္ပဏီဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားသို့ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက် ဝန်ဆောင်မှုပေးနေသော ကုမ္ပဏီဖြစ်ပါသည်။
မှတ်ချက် ။ ။ ငှားရမ်းသူ၏ ခရီးစဉ်အကွာအဝေး၊ အချိန်၊ ကုန်အမျိုးအစား၊ လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်များအပေါ် မူတည်၍ ဈေးနှုန်းများပြောင်းလဲမှုများရှိပါသဖြင့် အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက Website ၏ Contact တွင်ဖော်ပြထားသော ဖုန်း၊ အီးမေး(လ်)များသို့ ဆက်သွယ်၍ စုံစမ်းငှားရမ်းနိုင်ပါသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
304.8 × 167.64 × 198.12 cm
Per Trip, Daily, Monthly & Yearly
Nissan, UD, Toyota Dyna, Mitsubishi Fuso, Hino, Isuzu
Be the first to review “10 Ft FTL Load” Cancel reply
Box Truck/ Open Truck - Read More!
Hijet FTL Load
To becomealeader of car transportation company in Myanmar.
Provides professional and efficient transportation services.
Contribute to the development of Myanmar Logistics Industry.
Copyright © 2021 GTA Transportation Co.,Ltd